Aung Win Hein (Noble): 02/16/12
Bartholomew Bear loves the apple tree.
He loves climbing it, swinging from its branches, and hiding in its leaves.
But most of all, Ba loves counting its shiny red apples.
In Bartholomew’s garden there is an old apple tree.
1=ONE, red apple
Bartholomew loves the apple tree.
2=TWO, red apples
He loves swinging from its branches,
3=Three, red apples
And hugging it tight when it rains.
4=Four, red apples
He loves climbing the tree.
5=Five, red apples
When little black kitten climbs too high…
6=Six, red apples
He and George have to rescue her.
7=Seven, red apples
Bartholomew loves hiding under the leaves.
8=Eight, red apples
Best of all he loves counting the red apples.
9=Nine, red apples
George shakes the apples from the tree,
10=Ten, red apples
Puts them intoabasket,
0=Zero, (all gone)
And makes them intoahot apple pie.
ဘာသိုလိုမော်ဝက်ဝံလေးဟာ ပန်းသီးပင်ကို နှစ်သက်တယ်။
သူဟာ သစ်ပင်ပေါ်တက်ရတာကို ကြိုက်တယ်။
သစ်ရွက်ကြားတွေမှာ ပုန်းကွယ်ရတာကို နှစ်သက်တယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာတော့ အများဆုံးသူလုပ်တာကတော့…
သူဟာ သစ်ကိုင်းတွေမှာ တွဲလွှဲခိုစီးနေရတာကို ကြိုက်တယ်။
ပြီးတော့ မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာ ပန်းသီးပင်ကို တင်းတင်းကြတ်ကြတ် ဖက်ထားတတ်တယ်။
သူဟာ သစ်ပင်ပေါ်တက်နေရတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
သူနဲ့ဝက်ဝံကြီးဂျော့တို့ဟာ ကြောင်းကလေးကို ကယ်ဆယ်ရတယ်။
ဘာသိုလေးဟာ သစ်ရွက်တွေအောက်မှာ ပုံးကွယ်ရတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်။
အဲဒီအထဲမှာ အနီရောင်ပန်းသီးတွေကို ရေတွက်နေတာကို သူအကြိုက်ဆုံးပါပဲ။
ဂျော့ဆိုတဲ့ဝက်ဝံကြီးက ပန်းသီးပင်ကနေ ပန်းသီးတွေကို လှုပ်ခါချလိုက်ပါတယ်။
ပန်းသီးတွေကို ခြင်းတောင်းထဲ ထည့်ကြတယ်။
ပြီးတော့ ပန်းသီးတွေကို ပန်းသီးမုန့်ပူပူနွေးနွေး လုပ်ကြတယ်။